Witkoppen Clinic: Ụlọ-Ọgwụ Ezigbo | Igbo kasahorow
Wenezde. Ọnwa Mbụ 19, 2022
Jozi, Tọsde. Ọnwa Itolu 10, 2020 - Tuzde. Ọnwa Iri na Abụọ 7, 2021. 𓀠 1275
Ha iru ụlọ-ọgwụ. Aha ahụ nke ụlọ-ọgwụ ahụ na-bụ Witkoppen Health and Welfare Centre.
Ọnye?: Ụmụ ọdụ-ntụtụ atọ iru ụlọ-ọgwụ ahụ. Onyeisi oru ahụ na-bụ Bassett Jean dọkịta.
Maka gịnị?: Ụlọ-ọgwụ ahụ na-jee ozi mpaghara ahụ.
Ha na-eme ụmụ nnwale HIV na ụmụ nnwale TB.
Ha na-igwo nrịanrị ọrịa alaghiala na nrịanrị uche.
Ụlọ-ọgwụ ahụ na-ịhụ ọnwa ọ bụla ndị mmadụ 8500.
Ụmụ okenye na-kwụọ ụgwọ R70.
Ụmụ nwa na-kwụọ ụgwọ R50.
Ndị mmadụ ochie na ndị mmadụ nkwarụ na-kwụọ ụgwọ ọnweghị.
30% bụ onye mbiara mbiara.
46% bụ enweghị ọrụ.
Ego onwa nkịtị ahụ bụ R1700.
#mkpebi #ha #iru #ụlọ-ọgwụ #aha #ebee #Johannesburg #mgbe #1946 #ọnye #atọ #ọdụ-ntụtụ #onyeisi oru #dọkịta #Jean #Bassett #maka gịnị #jee ozi #mpaghara #eme #nnwale #igwo #ọrịa alaghiala #nrịanrị #uche #mmepụta #ịhụ #8500 #ndị mmadụ #ọ bụla #ọnwa #okenye #kwụọ ụgwọ #nwa #ochie #nkwarụ #ọnweghị #2010 #ozi #onye mbiara mbiara #enweghị ọrụ #nkịtị #ego onwa
Enyemaka - Icho - Akwụkwọ Nkọwa Okwu - Ụlọ Ahịa Akwụkwọ - Mma Ezigbo - Ọhụrụ | Jụọ Ajuju - Impressum